Shiinaha warshad bacda korontada iyo alaab-qeybiyeyaasha. Feiqing
Bacda ciidda ee Tababarka ee Miisaankeedu le'eg yahay
jawaanno cufan oo miisaan leh ayaa leh qolof dibedda ah iyo boorsooyin buuxiyo oo loogu talagalay iyada oo la adeegsanayo xoog-xoog badan, biyo-diid ah 100% nylon 1050D cordura oo la xoojiyay 3 jeer tolida. Tani waxay u oggolaaneysaa iyaga in la cadaadiyo ama loo riixo dhinac kasta iyadoon la jeexin. Waxaad sidoo kale dooran kartaa filinka 1pc ama 2/3 buuxiyo si aad miisaanka u hagaajiso.
Bacdayada cufan ee culeyska leh waxay ku sameyn kartaa 8/7/6/4 gacmeedyada ku wareegsan qolofka oo dhan; waxaad u habeyn kartaa sida aad u baahan tahay, ka doorbidid badan bacaha awoodda badan ee suuqa. Ikhtiyaarrada badan ee qabashada waxay ku siinayaan xoriyad aad ku qabato boqolaal jimicsi tababbar oo si wax ku ool ah u tababaraya.
waad isku hagaajin kartaa culeyska jawaanada ciida ee taatikada si ay ugu dhigmaan heerka jir dhiskaaga. Si fudud u saar boorsooyinka wax lagu buuxiyo si aad hoos ugu dhigto caabbinta, ama ku dar inbadan caqabadda weyn.
Si ka duwan inta badan jawaanada ciidda ee jimicsiga ee daadanaya ciidda, bacaha wax lagu buuxiyo waxaa ku jira muraayadaha gudaha ee labalaabma oo leh xirmooyin xoog leh oo nink-n loop ah oo loogu talagalay xakameynta aan la midka ahayn. Jiinyeerka YKK ee ku yaal qolofka dibedda ayaa hubinaya in waxa ku jira oo dhan ay ku sii jiraan meesha.
4.Custom Size: 30/40/60/80/120/200 / 220LB ama cabirka kg
Xiga: bacda ciida
Fitness Bacda Awooda
Bacda Awooda PCV ee Tababarka